IMidlalo EYIMPILO - ukusakaza ukusakaza, izithombe zemidlalo yeposi namavidiyo.
Joyina Iqembu Lemidlalo le-U LIVE
Qalisa ukusakaza kwemidlalo. Thumela izithombe namavidiyo.
Imidlalo ye-U LIVE - isiteji sokusakaza esizinikele emidlalweni naku-cyberport.
Hola ukusakazwa kwemidlalo, yenzani kube nabantu abaxoxa nje ngokuxoxa noma ukuthumela izindaba zakho. Sikhokha yonke iminithi yokusakaza kwakho nokubuka konke okuthunyelwe kwakho. Uma kukhona ababukeli abaningi, imali eningi sikukhokhela.
Sizokuphinda kabili yonke imali oyitholayo ku-U LIVE futhi sizokunikeza ukwesekwa okuvela kubathuthukisi bethu - uma ngabe ungabhalisela abangaphezu kuka-5000 eTwitch, YouTube, Facebook noma enye insizakalo.
Vele usithumele isixhumanisi ekhasini lakho ne-U LIVE Games ID: hello@ulive.games
Hlanganisa Imidlalo ye-U LIVE yokusakazwa nezinye izinsizakalo.
Thola imali ungaxhunyiwe ku-inthanethi
Iphrofayili yakho ingumthombo wemali engenayo. Thumela izithombe namavidiyo, engeza izincazelo ezimangazayo futhi uqoqe ukubukwa.
Ukubuka kwesithombe noma kwevidiyo ngakunye kukhokhelwa ngumsebenzisi; ukubukwa ngakunye okungu-50 kukhokhelwa insizakalo ye-U LIVE Games.
Amavidiyo wokusakaza komdlalo
Ukusakaza kwakho bekungalibaleki? Ungagcina ividiyo futhi sizokukhokhela ngokubuka okuzayo.
Hlangana nabalandeli bakho ngendlela entsha: umeme ababukeli abanentshisekelo kumidlalo. Ngenxa yohlelo lokuhambisana nathi singakusiza ukuba uthole okuningi kulo.
Yabelana ngesixhumanisi semidlalo ye-U LIVE ekuxhumaneni nomphakathi, uyithumele kuwebhusayithi yakho noma uthumele imiyalezo ngamanye kubangani bakho. Thola i-30% ekuthengeni kwabasebenzisi abamenyiwe.
Thola i-14% emholweni walabo ababhalise ngesixhumanisi sakho.
Shintshana ngezinhlamvu zemali ezi-5000 ngayinye ngama- $ 1. Isamba esincane sokuhoxisa - $ 10
Ukukhokha ngaphandle kwenkokhiso. Thola imali eyi-100% kanti Imidlalo ye-U LIVE izonakekela ngengozi yokubuyiselwa kwemali.
I-LIVE Games Team ibheka ama-cyber ezemidlalo
Sidinga amantombazane adlala kahle noma okwazi ukusakazwa nge-Chatting nje ngemidlalo.
Thola okuningiVula uhlelo lokusebenza